Hondo dzeMweya minamato yepfungwa | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Hondo dzeMweya minamato yepfungwa
Hondo dzeMweya minamato yepfungwa
Nhasi tichave tichibata nemweya yemweya minamato yepfungwa. Pfungwa dzemurume dzinobata dzakawanda pfungwa, uye idzo pfungwa, dzinodudzira mune hunhu hunoratidzwa nevarume. Iko hakuna kuita kana kusakwanisa kutora izvo murume zvaanozotora pasina kugadzirisa pfungwa yacho kubva mundangariro kutanga. Kana dhiabhori achida kuve nemurume, anotora pfungwa dzemunhu akadaro. Kana pfungwa dzave kubatikana, murume anopambwa nadhiyabhori.
Hazvishamise kuti rugwaro ruri mubhuku raZvirevo 4:23 Chengeta moyo wako nekushingaira kose; nekuti mukati mawo ndimo mune zvitubu zveupenyu. Zvese zvatiri kuratidza zvinotanga kubva mundangariro. Munguva pfupi yapfuura, tanga tichiverenga nhevedzano yenhau dzevarume vanobata chibharo vasikana vadiki, vanhu vachiurayana nekuda kwetsika dzemari, uye zvimwe zvese zvakashata. Mumwe murume akabata chibharo musikana wechidiki haana kungomuka rimwe zuva ndokuzvimanikidza pamusikana murombo asina mhosva. Akave achichengeta kufunga kwayo mupfungwa dzake kwenguva yakareba.
Mwari vanonzwisisa simba repfungwa, ndosaka Akaraira kuti isu tinofanirwa kutungamira moyo wedu nekushingairira kwese nekuti kubva iko kunoyerera nyaya dzehupenyu. Tinofanira kuchengetedza pfungwa dzedu kubva pakusvibiswa nadhiabhori.
Kana dhiabhori akabudirira kusvibisa pfungwa dzedu sevaKristu, isu tiri mariri. Tinofanira kudzidza kutungamira pfungwa dzedu neshoko nemweya waMwari kuti dhiabhori arege kugona kuitora. Isu takanyora runyorwa rwekunamatira kwehondo yemweya minamato yedu. Ivo vanozobatsira kutungamira mifungo yedu kupesana nehunyengeri hwadhiyabhorosi.
Ishe Mwari, ndauya pamberi penyu nhasi, ndinokumbira simba remweya remwoyo wangu. Ini ndinoda kuti moyo wangu uve chishandiso chidiki mumawoko adhiabhorosi. Handidi kuti moyo wangu urambe uchishandiswa nadhiyabhori. Ndinonamata kuti chiedza cheshoko renyu chivhenekere mugero wemwoyo wangu, uye chizoita kuti chisawanikwe nemaitiro aDhiyabhorosi muzita raJesu.
Ishe Jesu, rugwaro rwunoti kutya Ishe ndiko kutanga kwehungwaru. Ishe ndinonamata kuti muite kuti kutya kwangu kuve mumoyo mangu, ndikuite kuti nditye imi Ishe, uye muite kuti ndive chinoshamisa simba pakunyengedza dhiabhori muzita raJesu.
Ini ndinouya kuzopesana nemadhimoni ega ega ekunyengedza ayo angade kutora pfungwa. Ndinotungamira pfungwa dzangu neropa rinokosha raJesu. Ini ndinoramba kupererwa nemazano kune hunyengeri hwadhiyabhorosi. Ishe Jesu, ini ndinonamatira simba renyu nehungwaru kuti muzive mabasa edhiabhori. Ini ndinoramba kuve chibharo chadhiabhori. Ndinozvisimudzira pamusoro peyese muedzo uye yedhiabhori kuti pfungwa dzangu dzisvibiswe muzita raJesu.
Yese satanic ajenda ingangoda kuve yakagadziriswa mupfungwa dzangu yakadzimwa muzita raJesu. Ini ndinoisa pfungwa dzangu, manzwiro angu, uye zviito kuna Mwari Wemasimbaose. Ini ndinouya kuzopesana nepfungwa dzakaipa dzese muzita raJesu.
Baba ishe, kunzwa kwese kwekuchiva kunopedzwa nemoto muzita raJesu. Kunzwa kwese kwekuda kwenyama nepfungwa, Ishe, ndinovaparadza nesimba riri muropa rinokosha raJesu.
Kubva zvino, pandinosangana nenhamo nematambudziko, ndichasimba. Ini ndinoramba ndisina nyadzi kukotamira pakumanikidzwa kwemuvengi. Kubvira zvino, ini ndinoparidza masimba angu pamusoro peaneta ega epfungwa muzita raJesu.
Baba Ishe, ndinokumbira kuti muve nepfungwa, nemweya nemuviri. Ini ndinokumbira kuti utore zvizere kutonga kwehupenyu hwangu hwese muzita raJesu. Ishe Jesu, ndinokupa hupenyu hwangu, pfungwa dzangu, uye mweya wangu, uve mutongi wemoyo wangu, uve mambo wemweya uye ndiponese kubva mudenda rezvakaipa pfungwa muzita raJesu.
Ini ndinowedzera kunzwisisika pamweya. Ndinowedzera kusvinura kwangu pamweya nesimba rako uye nezita rako. Ini ndinotema kuti ndichave nehanya zvakakwana kuti ndione hunhu hwadhiyabhorosi. Bhaibheri rakayambira kuti tirege kusaziva mazano aDhiyabhorosi. Ini ndinokumbira kukwana kwakakwana pamweya kuti ndikwanise Kuziva kubata kwadhiyabhorosi.
Ishe ndinonamata mweya wenyu mutsvene nesimba. Kungofanana namazuva akare, kuti ndangariro dzawo dzakasimba. Ndinonamatira kuti mune icho chikamu iwe, uchaita kuti moyo wangu uve wakasimba uye unotyisa kurwisa Dhiabhori. Ndinonamatira mweya wako unoera unogara uchimutsa muviri wangu unofa. Ndinonamata kuti mundipe muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinonamata kuti kunyangwe munguva dzekutambudzika neyakaoma, muchandibatsira kukanda tariro yangu pauri uye nokuvimba kwangu. Nyasha dzekuenderera mberi tichiita chinhu chakakodzera icho chinokudza Baba uye kwete dhiabhori, Ishe ndipeiwo muzita raJesu.
Ishe, ndinokuzivisai muridzi wemoyo wangu nepfungwa kuna Kristu Jesu. Kubvira zvino, mweya wangu uye mashoko, uye kufunga kwangu kuchava kwaIshe. Ini ndinoramba kurega chero chimwe chinhu mupfungwa dzangu, dzangu dzese pfungwa nemataurirwo zviri kwauri, Ishe Jesu. Ini ndinoramba zvese zvakaipa pfungwa zvingangoda kuwana nzira mumoyo mangu. Ini ndinoparadza mafungiro ese akaipa nemoto waJehovha muzita raJesu.
Pfungwa dzese dzinonditungamira kutadzira munhu naMwari, ndinoramba kuzviisa mumoyo mangu. Kutya Jehovha ndiyo nhare yangu itsva. Ini ndinozivisa rusununguko rwangu kubva kune dzakaipa pfungwa uye zvishuwo. Ndinoraira kuti ndasununguka muzita raJesu.
Simba raMwari Wemasimbaose rinofukidza hupenyu hwako uye rinokuzivisa iwe manomano evavengi. Ini ndinotema kuti Mwari vanozviisa pamusoro pako muzita raJesu.
Previous nyayaZVINOTAURA BHAIBHERI PAMUSORO PENYAYA DZINOGARA
inoteveraHondo Minyengetero uye mitemo
Kunamatira Kune Simba Uye Nyaradzo
4 Mazuva Ekutsanya Uye Munamato weKuroora Kwemuchato